ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन समाजवादी पार्टीको देउवालाई आग्रह | सुप्रीम खबर
ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन समाजवादी पार्टीको देउवालाई आग्रह
२०७७ चैत्र २९, आइतवार, २: ०९PM
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताका लागि अग्रसरता लिन काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रस्ताव गरेका छन् । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले देउवालाई सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न आग्रह गरेको नेपाली काँग्रेसनिकट स्रोतले बताएको छ । आफूले प्रस्ताव दर्ता नगर्ने हो भने जसपालाई साथ दिन यादव र भट्टराईले प्रस्ताव गरेका हुन् ।
जसपाको उपेन्द्र–बाबुराम पक्षले राखेको यो प्रस्तावबारे देउवाका तर्फबाट कुनै जवाफ आइनसकेको स्रोतले बतायो । चैत २७ गते काँग्रेस र माओवादीसँग भएको छलफलमा जसपाका नेताहरुले आफ्नो पार्टीमा छलफल गरेर मात्रै सत्ता समीकरणबारे निर्णय दिने बताएका थिए । देउवानिवासमा बसेको तीन दलीय बैठकमा काँग्रेस सभापति देउवाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन जनाउन जसपासँग प्रस्ताव राखेका थिए । देउवाको सोही प्रस्तावमाथि छलफल गर्न आज दिउँसो २ बजे बालकुमारीस्थित पार्टी कार्यालयमा जसपाको पदाधिकारी बैठक बस्दैछ ।
अघिल्लो लेखमाबालुवाटारमा गुप्तचरहरुको मन्त्रणापछि नयाँ नक्सा गायब पारियो : रावल
अर्को लेखमागोंगबुको गेस्ट हाउसमा शव भेटियो